Double Dad (2021) | MM Movie Store
မိဘမစုံမလငျနဲ့ ကွီးပွငျးလာရတဲ့ ကလေးလေးတဈယောကျရဲ့အလိုအပျဆုံးအရာဟာ ဘာဖွဈနိုငျမလဲ?ငှကွေေးခမျြးသာမှုလား ခဈြခွငျးမတ်ေတာလား?????ဒါမှမဟုတျ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့မိသားစုဘဝလား?????အမတေဈခု သမီးတဈခု ဘဝနဲ့နလောခဲ့ရတဲ့ဗီဇငျဆာဟာ သူ့အဖကေိုတှရေ့ဖို့အတှကျ၁၈နှဈလုံးလုံးမြှျောလငျ့ခဲ့ရပါတယျ။
အမဖွေဈသူကိုမေးပမေယျ့ တှဖေို့အခြိနျမတနျသေးဘူးဆိုတဲ့အကွောငျးပွခကျြနဲ့ခဏခဏ အငွငျးခံရပွီးတဲ့နောကျမှာတော့ကိုယျတိုငျ အဖရှောပုံတျောဖှငျ့ဖို့ ကွိုးစားပါတော့တယျ။ကငျြ့စဥျတှလေိုကျစားတတျတဲ့အမဟော ဘာသာရေးကိစ်စနဲ့အိန်ဒိယကိုသှားဖို့အကွောငျးဖနျလာတဲ့အခါမှာတော့ဗီဇငျဆာတဈယောကျ အဖရှောပုံတျောဖှငျ့ဖို့အခှငျ့အရေးရရှိလာပါတော့တယျ။
အဖရှေိရာမွို့ဆီ ခွဆေနျ့လို့ ရှာဖှရေငျးကနအေဖဖွေဈနိုငျခွရှေိတဲ့သူဟာ တဈယောကျတညျးမဟုတျဘဲ နှဈယောကျဖွဈနတေဲ့အခါဗီဇငျဆာတဈယောကျ အဖရေငျးကိုရှာဖှတှေနေို့ငျပါ့မလား။အမကေရော ဘာဖွဈလို့ အဖရေငျးအကွောငျးကို မပွောပွခငျြရတာလဲ?
သူမရဲ့အဖတှေကေရော သူမကိုသမီးအဖွဈလကျခံနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုရှုခငျးကောငျးကောငျး နောကျခံတေးသှားလှလှလေးတှနေဲ့ပွီးသှားလို့ပွီးသှားမှနျးမသိလောကျအောငျ မြောပါသှားတဲ့အထိတငျဆကျထားတဲ့ ပျေါတူဂီဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားဖွဈတာမို့ ကွညျ့ဖို့ ညှနျးပါရစေ။
မိဘမစုံမလင်နဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလိုအပ်ဆုံးအရာဟာ ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ?ငွေကြေးချမ်းသာမှုလား ချစ်ခြင်းမေတ္တာလား?????ဒါမှမဟုတ် ပြီးပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝလား?????အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခု ဘဝနဲ့နေလာခဲ့ရတဲ့ဗီဇင်ဆာဟာ သူ့အဖေကိုတွေ့ရဖို့အတွက်၁၈နှစ်လုံးလုံးမျှော်လင့်ခဲ့ရပါတယ်။
အမေဖြစ်သူကိုမေးပေမယ့် တွေ့ဖို့အချိန်မတန်သေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ခဏခဏ အငြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကိုယ်တိုင် အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ကျင့်စဉ်တွေလိုက်စားတတ်တဲ့အမေဟာ ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့အိန္ဒိယကိုသွားဖို့အကြောင်းဖန်လာတဲ့အခါမှာတော့ဗီဇင်ဆာတစ်ယောက် အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိလာပါတော့တယ်။
အဖေရှိရာမြို့ဆီ ခြေဆန့်လို့ ရှာဖွေရင်းကနေအဖေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူဟာ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါဗီဇင်ဆာတစ်ယောက် အဖေရင်းကိုရှာဖွေတွေ့နိုင်ပါ့မလား။အမေကရော ဘာဖြစ်လို့ အဖေရင်းအကြောင်းကို မပြောပြချင်ရတာလဲ?
သူမရဲ့အဖေတွေကရော သူမကိုသမီးအဖြစ်လက်ခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုရှုခင်းကောင်းကောင်း နောက်ခံတေးသွားလှလှလေးတွေနဲ့ပြီးသွားလို့ပြီးသွားမှန်းမသိလောက်အောင် မျောပါသွားတဲ့အထိတင်ဆက်ထားတဲ့ ပေါ်တူဂီဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်တာမို့ ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပါရစေ။
30 Chua Phai Tet (2020)
Emily in Paris (Season 1) ၊ အပိုငျး (၈)